I-Cozy Stylish Entire Apartment ebhekene ne-Garden City
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Simon Peter
Hlala unethezekile kuleli fulethi elithokomele elikhanyayo nelinomoya eliseduze neGarden City Mall edumile kanye neQuiver Lounge. Uzoba nokubukwa okuvela kumavulandi amabili angasese nezinsiza ezinhle ukuze wenze ukuhlala kwakho unethezekile okuhlanganisa i-Wifi esheshayo, i-4K Smart TV yokuzijabulisa kwakho, ikhishi elifakwe ngokugcwele, iwasha/isomisi, kanye nefeni yomswakama ukuze kube lula kuwe. Ingabe ungumbhangqwana/umhambi oyedwa eholidini noma emsebenzini, ungabe usabheka okunye, vikela izinsuku zakho manje!
Nethezeka futhi uhlale ujabulile kule ndawo yokuhlala ethokomele engamamitha-skwele angu-109 enezihlalo ezithokomele kanye ne-43” 4K Smart TV
Vuka uvuselelwe futhi ulungele usuku lwakho embhedeni kasayizi wendlovukazi onemicamelo yegwebu lenkumbulo enikezwe ukunethezeka okuphezulu. Thola umsebenzi ngesikhathi uhlala endaweni yehhovisi efakwe ideski lomsebenzi nesitulo kanye nephrinta yazo zonke izidingo zakho zokuphrinta.
Pheka isidlo sakusihlwa sababili ekhishini elithokomele eliphelele eliphelele nge-cooker eshisa ezine enohhavini ogcwele usayizi, isiqandisi, nohhavini we-microwave.
Indawo enhle yokuphumuza umoya futhi uphumule ngenkomishi yekhofi ngemva kosuku olumatasa, kungaba umsebenzi noma ukudlala
Ifulethi lisendaweni ephephile, imizuzu emi-5 ukusuka eThika Road Mall, ukuhamba ngezinyawo imizuzu eyi-10 ukusuka e-Garden City naseMountain Mall. Ungathola isiphuzo ne-barbeque e-Quiver Lounge edumile okuwuhambo lwemizuzu emi-5 nje kuphela. Hamba uye e-Garden City uyothenga, udle noma ubukele imuvi nabangani.
I-TV engu- 43" ene-I-Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, I-HBO Max, Hulu, I-Netflix
Ibungazwe ngu-Simon Peter